Laal Singh Chadda Vs Krish 4 : Amir Oo Doonaya Inuu Hrithik Roshan Christmas 2020 Kula Dagaalamo!! – Filimside
waxaa mar kale lagu dhawaaqay isku dhac kale oo weyn iyadoo aan hore u ogayn in sanadka dambe ay isku dhacayaan labada filim ee kala ah Inshallah iyo Sooryavanshi kuwaaso ay kala hogaaminayaan Salman khan iyo Akshay Kumar waxaana dagaal uu ku dhex-mari doona Eid sandkan dambe
hadda waxaa lasoo warinaya in sanadka dambe la diiwan-geliyay dagaal kale oo weyn ka dib markii ay boxx office india ku dagaalamaan labada aktar ee kala ah Amir Khan kaaso wata filimka Laal Singh Chadda iyo Hrithik Roshan oo goobta la imaan doono filimka weyn ee Krish qaybtiisa afaraad
waxaana labadan jilaa ay ku dagaalami doonan feestada iyo dabaal-daga ciida gaalada ee Christmas iyadoo Amir Khan maalin ka hor uu ku dhawaaqay in filimkiisa Laal Singh Chadda la daawan doona Christmas sanadka dambe
halka aktarka Hrithik Roshan aabihiisa Rakesh Roshan isagana uu goor hore shaaciyay in taxanihiisa Krish la daawan doona feestada ciida gaalada ee sanadka 2020 waxaana dagaalkan uu noqon mid ugu weynaa ee dhawaanahan la arko maadaama ay boxx office india isku qaban doonan labo aktar ka mid ah aktarada ugu caansan gudaha bollywoodka kuwaaso si la imaan doonan labo filim oo si weyn loo sugaayo
Maxay Yihiin Waxa Sidharta Malhotra Heesto Ee Uusan Heysan Saaxibkiisa Varun Dhawan?
Marka laga hadlayao atooraayasha 90-kii ilaa hada Action-ka ugu wacnaa Bollywoodka waa qasab liiskan inuu kaalinta kowaad kasoo galo Super Star Sunny Deol maadama uu yahay atooraha ugu caansan dhanka dagaalka tan iyo 90-kii aqoonisaga uu ka helay 90-kii atoore ilaa hada darajadaas oo kale dhanka Action-ka ka gaaray majiro.
Fadlan Halkaan Hoose Kaga Bogo 10-ka Atoore Dhanka Action-ka Looga Haray Bollywoodka:
Sunny Deol aflaamtisa dagaal ah iyo sida uu shaashada kaga dhabeenayo Action-ka heerka sare ah ayuu ku qabsaday 90-kii Bollywoodka awood ahaan waana atoore marka uu shaashada hor yimaado ku mashquulinayo xitaa hadii aadan taagero u ahen.
Qatarta Actionka ninkaan ayaa laga soo gaaray waa atoore u bareeray halis naadir ah Khiladi Kumar 90-kii ficilada halista uu sameyn jiray aawged waxaa loo bixiyay “Jackie Chan-ka Bollywoodka” waana atoore aqoonsi weyn ku helay dagaalka iyo ficilada halista ha sameyntooda.
Salman Khan waxuu si toos ah u bilaaway sameynta filmada dagaalka ah 2009 isagoo dhankaas awood heer sare ah ku yeeshtay ilaa maantana Bollywoodka ku maamulaya isagoo 90-maadii aflaam jaceyl sameyn jiray inta badan.
Ajay waa mid kamid ah atoorayaasha dagaalka ku wanaagsan ee Bollywoodka ka tirsan isagoo sameyay aflaam badan oo dagaal ah.
Bilawgii qarnigaan ayuu soo caan baxay atoorahan balse waxuu Bollywoodka ku qabsaday aflaamtisa sida Dhoom 2, Krrish, Bang Bang iyo kuwa kale oo ah aflaam action heer sare leh.
Lasoco Qeybta labaad…
Shikha Talsani waa mid kamid ah atirishooyinka Filmka shactirada ah Veere Di Wedding kaaso la daawan doono 1 June waxaana wada jilayaan Kareena Kapoor, Swara Bhaskar, Shikha Talsania iyo Sonm Kapoor.
Hadaba dadka badankood gabadhaan aqoon umalahan sidaa aawged waxaan soo helnya xog ku saabsan atirishadan taaso aad qaab jiliinkeda kaga heli doonta filmkaan.
Veere Di Wedding Kahor Shikha Film Maka Soo Muuqatay:
Haa, waxay wax ka jishay filmka Wake Up Sid oo ay ku jileysay Ranbir Kapoor saaxiibtiisa ugu dhow dadka Waxay kaloo wax ka jishay filmka My Friend Pinto iyo Midnight’s Children.
Qoys Bollywoodka Magac Kuleh MiyeeKasoo Jeeda:
Haa, Shikh waxaa aabo u ah halyeey Bollywood Tiku Talsania oo ay soomalida qaarkod u taqaano “Is Ciil Ciil” waana jilaa aflaamta shactiro ku jili jiray 90-maadmkii.
Aflaamtu kasoo muuqday waxaa kamid ah Raja, Ishq, Hungama iyo kuwa kale oo badan waa jilaa doorarka shactirada caan ah xita Tv-yadaa kasoo shaqeyay.
Shikha kahor inta aysan Bollywoodka soo galin shaqooyin fara badan aye banaanka kasoo qabatay balse markii ay waxbarashad ku jirtay qoysked waxay ku dhihi jireen “Sida aabaha oo kale ayaad jilaa noqon doontaa” sababto ah yaraanteda aye aabahed daawan jirtay sido kalena jecled inee shaashada soo hor istaagto.
Shikha diinta ay heesato waa Hindu waxay dhalatay 7 Oct balse sanadkii ay dhalatay iyo inta sano ay jirto ilaa hada lama oga waa xog aan wali shaaca laga qaadin sido kale waxay kusoo caan baxday filmka Wake Up Sid (2009) Bollywoodka oo dhan waxay ka taagerta aabahed iyo Sonam Kapoor oo ay saaxiibo aad isugu dhow yihiin ugu dambeyna waa gabar aan wali la guursan Bollywoodkana heer inee ka gaarto rabto.
Jilayaasha Bollywoodka qaar kamid ah ayaa durba sadaqeesteen xubnahooda kadib marka ay geeriyoodan in xubanahaas loo galiyo dad u baahan.
Hadii ay geeriyodan waxaa sii shaqeyn doonan xubnahooda oo qof kale isticmaali doono sida aan hader soo helnay qaar kamid ah jilayaasha Bollywoodka ayaaba sii saxiixen in hadii ay geeriyodan xubnahaas qofkii u baahan loo galin karo.
Halkaan Hoose Kaga Bogo Xidigaha Bollywoodka Xubnahooda Sadaqeesteen:
Waxuu sadaqeestay Xubnihiisa kala ah Indhaha, Kalyaha iyo Wadnaha kadib dhimashadiisa.
Boqorada Bollywoodka waxay saxiixday markii ay geeriyooto in Indhaheeda sadaqo yihiin oo qofkii u baahan loo galin karo.
Sido kale atirishada 90-maadki Juhi Chawla waxay geerideda kadib sadaqeesatay ama ay dadka masaakiinta ah ugu deeqday indhaheeda.
Bollywood Action Hero Suniel Shetty waxuu kujiraa jilayaasha Bollywoodka ee xubnahooda sadaqeesten mar hore waxuuna dhankiisa bixiyay Indhahiisa iyo wadnihiisa kadib geeridiisa.
Atirishada ugu guulaha badan Bollywoodka taariikh ahaan Hema Malini waxay deeqday indhaheeda kadib geerideda in dadka ay isticmaali karaan mudo dheer kahor ayeena sadaqeesatay.
Lasoco Qeybta Xigta…..
Nolosha Jilayaasha4 mins ago
Nolosha Jilayaasha33 mins ago
Nolosha Jilayaasha55 mins ago
WARARKA MAANTA3 hours ago
CIYAARAHA13 hours ago
ARRIMAHA BULSHADA23 hours ago
CIYAARAHA24 hours ago
Dhageyso barnaamijka LIVE NOW (22 May 2019) Warar Sport Update ah kaga bogo
ARRIMAHA BULSHADA1 day ago
Nolosha Jilayaasha2 days ago
Big B Wadnaha, Priyanka Indhaha, Salman Sambabka Iyo Xidigaha Bollywoodka Sadaqeesteen Xubnahooda Kadib Dhimashadooda (+Sawiro)